UMeyiwa ubona kusenamagebe kwezokuthwebula - Bayede News
Home » UMeyiwa ubona kusenamagebe kwezokuthwebula
Inkakha yezokuthwebula izithombe uSiyabonga Msizi Meyiwa waKwaMashu akalilahlile ithemba lokuthi umkhakha wezokuthwetshulwa kwezithombe uyogcina ubasebenzela aboHlanga njengoba kwenzeka kwezinye izizwe. Lokhu kuvele engxoxweni uSiyabonga abe nayo nentatheli yezobuciko yeBAYEDE. Ngokusho kwakhe amagebe akhona kule mboni adalwa yizinto eziningi, ikakhulukazi umlando waleli lizwe wokungalingani ngokwamathuba emfundo. “Okunye okuyinkinga wukuthi sihlala emhlabeni oguquguqukayo. Le mboni yezokuthwebula isiguquke kakhulu kweyabe ayikho eminyakeni eyedlule. Njengamanje yonke into yenziwa ngendlela yedijithali kanti abathwebuli abaningi basasilele ku-analogi.
Lokhu-ke kwenza abantu abaningi ikakhulukazi aboHlanga abakule mboni bathwale kanzima ngoba kufanele bafunde izinto ezintsha kube amathuba okwenzenjalo engandele bani,” kuchaza uMeyiwa. UMeyiwa uqhubeke wakhala ngokungabi baningi aboHlanga okuthi noma sebengenile ezikhungweni zemfundo ephakeme badlulele emaqhuzwini aphakeme emfundo. “Njengamanje mina kade ngiphothula iziqu zeBachelor of Technology in Photography kanti njenganje sengidlulele eqhuzwini leMasters. Inhloso wukuthi ngiqonde ngokuphelele ngokwenzeka kule mboni futhi ngibe yingxenye yoguquko olwenzeka kuyo. Inkinga isekuthini asibaningi esicabanga ngalolu hlobo lokho bese kwenza ukuthi singakwazi njengaboHlanga ukuba nezwi uma silwisana nenqubo yobukoloni ezikhungweni zemfundo ephakeme,” kuchaza uMeyiwa ngesineke.
Intatheli ifune ukwazi kuMeyiwa ukuthi ngabe kunasidingo sini sokuthi umuntu afunde ajule emkhakheni wokuthwebula izithombe. Lokhu intatheli ibikubuza ngoba ezindaweni zasemakhaya nasemalokishini baningi abenza lo msebenzi bengawufundelanga ndawo futhi badlule bathole izincomo kubantu abasuke bebenzela umsebenzi. Lapho uMeyiwa uphendule wathi: “Angiphiki impela ukuthi kunjalo. Nami elokishini engiphuma kulo bakhona baningi impela engikhule bewenza lo msebenzi futhi bewenza kahle ngenxa yesipiliyoni. Umbuzo engingaba nawo kuwe wukuthi bangaki osababona begaxe amakhamera behambe bethwebula izithombe? Iqiniso ukuthi bayancipha. Isizathu salokho wukuthi siphila esikhathini samaselula akwenza konke usokhamera akwazi ukukwenza. Lokho kunciphisa amathuba okuziphilisa kule mboni.
Okwesibili wukuthi isikole sikuvulela amakhasi amasha nokade ungawazi ngalo msebenzi. Ufundiswa ukuphatha umsebenzi njengebhizinisi uphume nasekudayiseni isithombe ngasinye kodwa ukhokhelwe ngokubizwa uzokwenza umsebenzi. Umehluko usekuthini uma uzokhokhisa umuntu ngesithombe ngasinye ufana nomuntu odlalayo kanti uma uzokwenza umsebenzi uzokhokhelwa ngokubizwa imali ozoyithola izoba nkulu. Phela lapho ufaka zonke izindleko ezifana nesikhathi, uphethilolo nokunye okunjalo,” kubeka uMeyiwa. Uqhubeke wathi ukufunda kusiza ngokufundisa okusha ongeke wakuthola emgwaqweni. “Umuntu othwebula izithombe engakufundelanga ndawo ugxila kakhulu esithombeni nasebuhleni baso. Laphaya esikoleni ufundiswa ukuxoxa indaba usebenzisa okuthwebulile njengomongo. Ngaphezulu kwalokho uma abakwethu bengawufundele bafika emazingeni aphakeme kulo msebenzi thina esisezikhungweni sinenkinga yabantu esingeyamisa esikwenzayo ezimfundisweni zabo ezisuselwa emlandweni waleli lizwe. Ezikhungweni zemfundo ephakeme sinenkinga yokuthi ukuze ucaphune ulwazi kwabasendulele kulo mkhakha kubhekwa izinga lemfundo. Lokho- ke kuletha isimo lapho ubuciko bethu singaboHlanga buncike ezimfundisweni zabantu abangebona abengabadi. Ukuthwebula izithombe kungumsebenzi wobuciko. Ubuciko buncike emasikweni nakusikompilo lwabantu ukuze buxoxe ngokuphelele indaba yabo,” kuqhubeka kuchaza uMeyiwa. Uqhubeke wathi ukungakhuthaleli imfundo kwenza ukuthi amaciko akulo mkhakha agcine esebenza njengothisha ezikoleni.
Lokho kuwenza angabi nomthelela ozwakalayo ekuguquleni indlela umphakathi ocabanga ngayo esebenzisa ubuciko bezokuthwebula. Mayelana nokuthi yikuphi abangasizwa ngakho abanye abathwebuli uMeyiwa uthe kufanele bahlanganiswe babe yimbumba yize lokhu kuyinkinga ngenxa yokuqhelelana kwabo ngokokuhlala. Kubalulekile ukuba nezigcawu zokubonisana bengabathwebuli ngomkhondo owehlukile osuthathwa yilo mkhakha. “Isibonelo salokho wukuthi njengoba kade ngenza ucwaningo ngokwezifundo ebengizenza ngisebenze kakhulu nabaqhubi bezigadla phakathi nedolobha iTheku. Ngifunde okuningi ngendlela abale mboni yokuthutha izimpahla ngezinqola abaphathwa kabi ngayo ngabashayeli bezimoto nalabo abahamba ngezinyawo. Okufike kwenze isimo sabo sibe bukhuni kakhulu wukuthi abaningi babo baqhamuka kwelasemaMpondweni. Njengoba ngiqhubeka nezifundo nje ngisazoqhubeka nalo ucwaningo ngale mboni yabaqhubi bezigadla. Sengike ngabamba nombukiso wezithombe zabaqhubi bezigadla laphaya eBeerhall ngemuva kwe-International Convention Centre (ICC),” kusho uMeyiwa. Mayelana nokwamgqugquzela ukuthi angene emkhakheni wezokuthwebula uMeyiwa ubale umzala wakhe osebenzela uMasipala we-Itheku owayeguqulela kudijithali izithombe ezindala. Wamgqugquzela ukuthi angene kulo mkhakha wabona ukuthi nokho kungaphileka ngalo mkhakha.
Ukuthi kuyaphileka ngalo mkhakha kuMeyiwa kubonakala ngemisebenzi angene wagamanxa kuyo nemenza akwazi ukuphilisa umndeni wakhe azinze nawo elokishini laKwaMashu. “Ngisebenza ngokugcwele njengomthwebuli wezithombe zeLadysmith Black Mambazo. Phakathi kwezinkampani eziningi ezimqasha ukuthi azenzele umsebenzi kukhona iSouth African Breweries (SAB), iMultichoice, iTransnet, iPlayhouse, iTrade and Investment KZN, Ugu Jazz, Last Dance eba seBallito zingama-31 kuZibandlela, Igagasi neVuma FM nezinye izindawo eziningi,” kuchaza uMeyiwa. Mayelana nekusasa likaMeyiwa kwezokuthwebula uthe uzibona engumthwebuli wamadokhumentari ogcwele nozohambela amazwe ngamazwe enza imibukiso. Lokhu kubukeka kuyinto ezokwenzeka masinyane ngendlela akhuthele nafunda mawala ngayo.
Bayede News Jan 31, 2020